Kuvaka Kukosha mune Nhanho Dzese dzeRwendo Rwako rweVatengi | Martech Zone
Kuvaka Kukosha mune Nhanho Dzese dzeRwendo rweVatengi
Mugovera, July 17, 2021 Mugovera, July 17, 2021 Jim Berryhill
Kuvhara kutengesa inguva huru. Ndipo apo iwe paunogona kupemberera iro rese basa iro raenda mukumisikidza mutengi mutsva. Ndipo pakaunzwa zvinoedzwa nevanhu vako vese uye yako CRM neMarTech maturusi. Iyo pop-iyo-champagne uye inofema kugomera kwekuzorora kwenguva.
Ichowo chingori kutanga. Mberi-kufunga kwekushambadzira zvikwata zvinotora inoenderera nzira yekugadzirisa iyo rwendo rwevatengi. Asi mabhenefiti pakati pezvishandiso zvechinyakare anogona kusiya mukaha mukubatana pakati pekusaina pamutsetse une madota uye nhaurirano dzekuvandudza. Apa ndipo panotarisirwa kukosha kwevatengi kunogona kuita mutsauko wese.
Izvo zvakagara zvichionekwa sesimba rekutengesa rekushandisa izvozvi zvakare chakakosha chikamu chekuona kubudirira kwevatengi. Munguva yekutengesa maitiro, kutarisisa pakukosha kungangove kwakajeka bhizinesi kesi yechigadzirwa chako pamwe nematanho ekutanga enzvimbo dzezvinonyanya kukosha kumutengi wako mutsva. Pasina kuzvipira kune kukosha kwevatengi musangano-wakapamhama, zviri nyore kupotsa kushandisa panheyo iyi sezvo hukama hunowedzera. Naizvozvo, kuve nemidziyo yekushandisa iyo inogona kushandiswa neako maviri ekutengesa uye nekubudirira kwevatengi zvikwata zvakakosha zvakanyanya.
Ruzivo rwese uye nzwisiso yakaunganidzwa panguva yekutengesa inogona kuratidza kukosha kwakaringana mukugadzirisa kugamuchirwa uye kukura kwekushandisa kwezvigadzirwa zvako. Mushure mezvose, kubudirira kwevatengi kwakavakirwa mupfungwa yekuendesa kukosha kune vatengi vako.
Iyo nyaya yemakambani mazhinji ekubudirira kwevatengi ndeyekuti aite sei kukosha kwakadaro kuverengeka uye nekuzviratidza nenzira dzinokanganisa. Apa ndipo apo kuve neiyo chaiyo-nguva dashboard yemutengo yakaunzwa kunogona kuita mutsauko wese mukuchengetedza uye kutaurazve. Panzvimbo yekutamba yekuzvidzivirira, kushandisa kuchinjisa, kana kushivirira yakakwira churn mitengo, kusendamira mukutenga kukosha kwevatengi kunopa vatengi vanobudirira zvikwata simba rekudarika echinyakare zvekutenga zvipingamupinyi, kuvhura nzira yekukwirisa / kuyambuka-kutengesa uchishandisa chaiyo-nyika ROI uye kukosha metric.
Semuyenzaniso, ServiceNow, mutungamiri mukushambadzira kwekushambadzira kwedhijitari, akagadzira vatengi kukosha kwekushandisa maturusi kuti awanikwe kumatimu ayo kambani-yakafara. Izvi zvinogonesa chero munhu anotarisira zviitiko zvinotarisana nevatengi kuverenga uye kugovana zvakadzama kukosha metric. Nekuda kweizvozvo, munhu wese akakwanisa kusimbisa nhaurirano dzavo, mharidzo, uye zvinhu muhuremu hunoyerwa hunounzwa neServiceNow kune vatengi vayo. Nekuda kwekuyedza uku, kambani yakavandudza mwero wayo wehwina pazviitiko zvinotungamirwa nemunda na1.7X uye yakapeta zvakapetwa chiyero pamikana yekutengesa.
Iyi nzira yakajeka yekugadzira vatengi kwehupenyu hwese, inova ndiyo yekupedzisira chiyero chekubudirira kwekuti zvikwata zvako zvakwanisa sei rwendo rwevatengi. Kuita kukosha kuve dombo rekona rekutaurirana kwako uye kuvaka chivakwa chinhu chakakosha cheichi. Kufungidzirwa kwekukosha kwekutaurirana kune simba rekuvhura nhanho nyowani dzekuita. Aya ndiwo maitiro anoita makambani shanduko kubva kumutengesi kuenda kune anovimbika chipangamazano. Uye mukuita kudaro, kuyambuka-kutengesa uye kumusoro-kutengesa kuve hurukuro dzepanyama dzinobva pane yakakwidziridzwa maonero. Nenzira iyi, hukama hunova hwekudyidzana kwenguva refu uye mutengi kwenguva refu kukosha (LTV) uye mambure inodzokororwa mari (NRR) zvinowedzeredzwa zvinoshamisa.
Nekutarisa pakukosha, makambani ane ruzivo rwavanoda kuti vanyatsoita hukama huripo nekukura zvichibva pakunzwisisa kwakagovaniswa kwekubatana pamwe nevatengi vavo. Kugara uchitaurirana nezve kukosha kwakapihwa, pachinzvimbo chekuvandudzwa kuri patafura kana vatengi vari kugunun'una, zvinoita kuti makambani aise hwaro zvakanyanya kuita hwehwina-kuhwina hupenyu hwehukama. Kana wako mutengi anobudirira timu ikakwanisa kukwidziridza nhaurirano kusvika padanho repamusoro, nhaurirano dzekumutsiridza dzinogona kutarisa pane zvaunogona kuita zvichitevera kupokana nezvakaitwa munguva yakapfuura. Izvo zvese ndezvekutaura mutauro webhizinesi uye kukosha kwemari. Izvi zvakare zvinoita kuti kudyidzana uku kuve kwakanangana nekuronga ramangwana pachinzvimbo chekutaurirana nekururamisa hukama.
Kukosha Iko Kuenderera Kukurukurirana
Sezvo zvinoda shanduko, mabhizinesi anochinja, anowedzera, uye pivot, izvo izvo vatengi vako zvavanokoshesa zvinochinja nekufamba kwenguva. Kugara uchishanyirazve kukosha metric zvese timu yako nevatengi vako zvinotarisana nezvakakosha. Chikamu chebudiriro yevatengi kuita chinofanirwa kunge chiri kuongorora nekumisikidza mabenchmarks ebudiriro kuti uve nechokwadi chekuti iwe nevatengi vako muri kuronga ramangwana pamwe chete. Ichi ndicho chakakosha cherwendo rwevatengi rwakagovaniswa.
Nekuisa kukosha pakati pekufamba kwako kwevatengi, zvikwata zvako zvine nzira yekumanikidza yekuvakira pakubudirira uye kugadzira denderedzwa rakanaka rekukosha kwevatengi. Uye mhedzisiro yekusanganisa kukosha kwese kuzere vatengi rwendo rwakajeka: Kuwedzera kugutsikana kwevatengi. Yakaderedzwa mutengi churn. Yakakwirira Net Promoter Zvikoro (NPS). Greater Net Inodzokorodza Revenue (NRR). Izvo zvese zvinowedzera kusvika kune yepazasi-mutsara kubatsirwa iyo ine simba, kuyerwa, uye zvine chinangwa.
Tags: CRMrwendo rwevatengivatengi nzendomutengi wehutano hwehukamayedhijitari yekufambisa kufambisachokushandisa chokutengesayekutengesa yekufambisa yekufambisaservicenowworkflow automationkufambiswa kwemabasa ekugadzirisa